Kullane Jiis oo jabiyay amarkii Ra’iisul Wasaare Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Kullane Jiis oo jabiyay amarkii Ra’iisul Wasaare Rooble
Guddoomiyahii hore ee gobolka Gedo, Cusmaan Macalimow, ayaa sheegay in hay’adda nabad-sugidda ka hor istaagtay in uu ka dhoofo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyahii hore ee gobolka Gedo, Cusmaan Nuur Xaaji (Macalimow), oo dhawaan warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in amar ka soo baxay hay’adda NISA looga hor istaagay inuu maata ka duulo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Macalimow, oo sida uu sheegay ku wajahnaa gobolka Gedo, ayaa taliska hay’adda Nabad-sugiddda iyo Sirdoonka Qaranka, ku eedeeyay in ay amreen diyaaraddii uu ku qornaa in aysan qaadi karin, taas oo sababtay in isaga iyo wafti la socday laga hor joogsado socdaalka Gedo.
Wuxuu sheegay in ay jiraan, shaqsiyaad u sharaxan kuraasta Baarlamaanka, qaar ka mid ah ergada, Jananno, iyo dad kale oo badan ay muddo ku xayiran yihiin Muqdisho, kadib markii, Cabdullhi Kullane (Jiis) uu diiday in muwaadiniintu u socdaalaan degaannadooda.
Dhawaan ayay ahayd, markii Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, uu fariintiin adag u diray Taliyaha Nabad-sugidda iyo sir-doonka Qaranka, Fahad yaasiin Xaaji Daahir iyo Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Madoobe), kaas oo uu ku sheegay in aan qofna laga hor istaagi karin safarrada Jubbaland.
Hayeeshee, sida uu sheegayo, Macalimow, Farmaajo, Fahad iyo Kullane, ayaa jabiyay amarkii Ra’iisul Wasaaraha, wuxuuna ugu baaqay inuu tallaabo ka qaado saraakiishii jabisay amarkiisa ahaa in aan qofna laga celin karin garoonka.
Sida ay fahan-san tahay Keydmedia Online, ku dhawaad Labaatan qof ayaa ku dhawaad lix bilood ku xayiran Caasimada, kuwaas oo Taliska NISSA, uu ka hor is taagay in ay cagaha dhigaan Garbahaarey.
Dhanka kale, Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam, ‘Madoobe’ ayaa dhawaan amray in uusan Kismaayo cagaha dhigin Cabdi Cali Raage, oo saaxiib dhow la’ah Farmaajo, taas oo sababtay in dib Muqdisho loogu soo celsho diyaaraddii uu saarnaa.
Waxaa la sugayaa tallaabada uu arrinkaan ka qaado Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo dhawaan sheegay inuu tallaabo sharciga waafaqsan kula xisaabtami doono ciddii hor istaagta socdaallada.